Izindaba - IHuaian District Science and Technology Bureau yeza enkampanini yethu ukuzoqondisa umsebenzi
UJeremy Guan, umphathi jikelele we-Huaian ASN technology technology CO., LTD unikeze abaholi be-Huai'an District Technology Bureau abafanelekile abeza enkampanini yethu ukuphenya nokucwaninga ngemfudumalo ngomhlaka-26 Agasti. Abaholi abafanele beTechnology Bureau balalele ukwethulwa kokukhiqizwa nentuthuko yenkampani yethu, bavakashela i-workshop yenkampani yethu futhi bafunda kabanzi ngokuqamba okuzimele kwenkampani yethu, ucwaningo lwesayensi nentuthuko, amathalente ocwaningo lwesayensi nokunye.
Ngemuva kokulalela isimo senkampani yethu, baba nomhlangano nomphathi jikelele wenkampani yethu uJeremy Guan nabantu ababhekele iminyango efanele yenkampani ukuqonda ubunzima inkampani yethu ehlangane nabo emisha nasentuthukweni nokuthi Iziphi ezinye izinsizakalo izinkampani ezidinga kuzo uhulumeni, ukuze amabhizinisi akwazi ukuthuthukisa kangcono amakhono awo amasha ezobuchwepheshe futhi athuthukise ukuthuthukiswa kwawo kwezobuchwepheshe.
Egameni lenkampani, iMenenja Jikelele uJeremy wamukele abaholi be-District Technology Bureau futhi wabonga ngokuxhaswa kwayo okuqinile. UJeremy uthe impumelelo yanamuhla ye-ASN Medical ayinakwehlukaniswa nezinqubomgomo zesizwe zokukhetha ezamabhizinisi nokusekelwa kwezesayensi nezobuchwepheshe, kanye nokunakekelwa nosizo lwesikhathi eside kweminyango kahulumeni, unethemba lokuthi iminyango kahulumeni kuwo wonke amazinga angaqhubeka nokuxhasa i-ASN Ezokwelapha ziba zikhulu futhi ziqine, sizoqhubeka nokusebenza kanzima ukwenza igalelo elikhulu ekuchumeni komnotho wendawo.
Abaholi be-District Science and Technology Bureau bakuqinisekisile ngokugcwele ukuthuthukiswa komsebenzi wesayensi nobuchwepheshe benkampani yethu futhi bathemba ukuthi i-ASN Medical ingenza imizamo ephikelelayo yokwenza amaphrojekthi amaningi nokufeza imiphumela eminingi.
Abantu ababhekele iminyango efanele yenkampani yethu bahambisane nalo lonke lolu hambo ukuze kwenziwe uphenyo.